Ny alakamisy ampitson’io anefa dia nahazo loharanom-baovao indray ny mpanao gazety tao Morondava fa 217 sisa ny sokatra velona. Roso tamin’ny fikaroham-baovao, nanontany ny manampahefana sy ny solotenam-panjakana ny anton’io fihenana tampotampoka io isan’ny sokatra io tao anatin’ny 24ora ireo mpanao gazety tao Morondava. Niovaova be ihany ny tarehimarika nanomboka teo. Voalaza fa nisy sokatra 6 maty. Mbola be ny elanelana na nisy aza izany.
Omaly sabotsy 13 janoary dia nisy ny fihaonana notarihin’ny Prefen’i Morondava, natrehin’ny lehiben’ny Faritra Menabe, ireo mpiara-miombona antoka amin’ny sehatry ny tontolo iainana. Niakatra ny feo, voakihana mafy mpanao gazety nitaky ny mangarahara. Niafara amin’ny fampiantsoana eny amin’ny Zandary rahampitso ny raharaha. Mpanao gazety roa mianadahy no hiatrika ny Zandary, miaraka amin’ny porofo (raki-peo) eo ampelan-tanan’izy ireo.